खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा ! – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७७ चैत्र १६, सोमबार ०६:०६
हामीले एकदमै मनपराउने र दैनिकरुपमा खाने खानेकुरा पेटमा समस्या पनि उब्जाउन सक्छ । कतिपय खानेकुरा अन्यसँगसँगै खायो भने पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गर्दछ । त्यसैले खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा :-
३. काँचो गोलभेंडा
७. दूध हालेको चिया